Nzukọ Ọha njem gburugburu ụwa na -anụ maka mkpa ọhụhụ n'ọdịdị ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » nzukọ » Nzukọ Ọha njem gburugburu ụwa na -anụ maka mkpa ọhụhụ n'ọdịdị ọhụrụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ gbasara Seychelles • Sustainability News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • WTN
Nzukọ njem njem ụwa niile
Virtual Global Tourism Forum (GTF) mechiri taa, Septemba 16, 2021, na Jakarta, Indonesia. Ihe omume a mere ka ndị isi ngalaba si gburugburu ụwa gbakọta ọnụ ka ha na -agbanwere echiche maka ọnọdụ dị ugbu a na njem nlegharị anya na ile ọbịa.
Onye isi oche ndị nlekọta njem nlegharị anya nke Africa, Alain St. Angle kwusiri ike na Global Tourism Forum na Jakarta, na njem nlegharị anya chọrọ nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi na nke ahụ ka bụ isi maka ọganiihu ụlọ ọrụ ahụ.
O kwuru na Gọọmentị Indoneshia nwere ọtụtụ ohere njem na obodo ga -eji ihe niile o nwere iji bulie ọhụhụ.
St. Ange rụtụrụ aka na na ọkwa ọhụrụ COVID nkịtị, ọ dị mkpa ịghọta na ebe njem ọ bụla ga -esi n'otu ọdọ mmiri azụ azụ.
Alain St.Ange, onye bụbu onye njem nlegharị anya nke Seychelles, ụgbọ elu ụgbọ elu, onye na -ahụ maka ọdụ ụgbọ mmiri & onye na -ahụ maka mmiri na ugbu a onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB) na onye guzobere otu Njem Njem Ụwa (WTN), ụnyaahụ kwuru okwu na Global Tourism Forum nke a na -eme na Jakarta na Indonesia.
Adreesị St.Ange, dị ka akụkụ nke otu mkparịta ụka, nọ na -eche ya nke ukwuu n'Afrịka dịka amaara ya na ọ na -akwado ịbawanye njikọ azụmahịa na njem n'etiti Afrịka na ASEAN Block. Alain St.Ange, onye na -ahụ maka njem nlegharị anya nke dabere na Indonesia nwa oge, na -arụ ọrụ site na FORSEAA (Forum of Small Medium Economic AFRICA ASEAN) iji kwalite azụmahịa na njem nlegharị anya na Afrịka site na mba ASEAN.
St.Ange, onye otu ndị otu bọọdụ maka World Tourism Network nke ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya na-agba mbọ ịbawanye visibiliti nke ebe ndị njem na-enye ogologo oge gafere maka obere njem na obere azụmaahịa na azụmaahịa ndị njem gburugburu ụwa nke na-abụghị. ihe ijuanya ịnụ mmasị sitere na kọntinent gbasara adreesị ya.
St.Ange malitere site na -ekwusi ike na njem nlegharị anya chọrọ nkwado ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi na nke ahụ ka bụ isi maka ihe ịga nke ọma ụlọ ọrụ ahụ ka ọ na -ekele osote onye isi ala na onye minista na -ahụ maka njem maka ha abụọ nọ na mbipụta nke a. Nzukọ World Tourism. Ọ gara n'ihu ịkwagide ka ọ na -echetara gọọmentị Indonesia ọtụtụ ngọzi njem nlegharị anya nke Indonesia ji gọzie, mana ọ sịrị "ụdị ike na itinye ego n'ime ịzụlite ha ga -ala n'iyi ma ọ bụrụ na Indonesia ejighị ihe niile dị na ya mee ka ọhụhụ nke mba ahụ. ”
Alain St.Ange rụkwara aka na nke ọhụrụ na dịka post-COVID a na -atụle, ọ dị mkpa ịghọta na ebe njem ọ bụla ga-esi n'otu ọdọ mmiri ahụ na-akụ azụ maka ndị ọbịa ha nwere nghọta na ebe kachasị ọhụrụ na nkwadebe ga-adị mma idobe azụmaahịa COVID-post.
St.Angeskọrọ banyere ahịa niche site na nke ọdịnala ruo agro-njem nleta, njem nlegharị anya okpukpe, njem egwuregwu, njem nlegharị anya halal, wdg, na-ekwu na a ga-atụgharịrịrị nkume ọ bụla n'ịchọ ahịa ahịa ọhụrụ.
Ọ nọrọ oge kọwapụta mkpa ọ dị isetịpụ ụzọ maka obodo ahụ wee nyezie ọrụ nha ọnụ ahịa, na -eburu n'uche na obodo ahụ bụ ebe ọ na -aga nakwa na ọ dị mkpa ka mba ahụ kwadebere n'ihu onye sitere na kọmiti ahụ kwusie ike na “ije okwu ahụ ”dịzi mkpa ugbu a karịa mgbe ọ bụla ọzọ.
Onye bụbu Mịnịsta rụtụrụ aka na mkpa ọ dị isonyere ndị agbata obi na ndị enyi wee kpọpụta Afrịka na Kọmitii Njem Nleta Africa dị ka ihe atụ nke kọntinent chọrọ ụlọ ọrụ njem ya na ịpụ ihe niile iji mee ka ọ rụọ ọrụ.
Nzukọ njem nlegharị anya ụwa niile 2021 hụrụ ndị osote onye isi ala Indonesia na onye bụbu Prime Minista UK yana Dr. Taleb Rifai, onye bụbu odeakwụkwọ ukwu nke UNWTO, yana onye bụbu onye minista njem nlegharị anya nke Indonesia niile edepụtara n'akụkụ Onye isi ala. Ụlọ Nzukọ Ọha Na -ahụ Maka Ụwa.